श्रीमती परपुरुषसँग लागेपछि फेसबूकमा यस्तो लेखेर बिदेशमै नरेश राना सधैका लागी अस्ताए… (भिडियो सहित) - Nepal Aawaaj
श्रीमती परपुरुषसँग लागेपछि फेसबूकमा यस्तो लेखेर बिदेशमै नरेश राना सधैका लागी अस्ताए… (भिडियो सहित)
Moon Sampang Rai — February 18, 2021 add comment
काठमाडौ । नरेश राना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा थिए । उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा थिए । उनीसंग एक जना ब्यक्तिसंग विवाद भएको थियो । उनले मलेसियामा देह त्याग गरेका हुन् । उनले प्रकाश बस्नेतले आफुलाई यस्तो निर्णय गर्न बा ध्य पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका थिए ।
यो सल्यानको घटना हो । २८ वर्षका नरेश रानालाई अर्का ब्यक्तिले नै देह त्याग गर्न बाध्य पारेको बताइएको छ । विदेशमा चिनिएका साथी प्रकाशसंग नरेशको श्रीमतीको पनि कुराकानी हुन थाल्छ । नरेशले देह त्याग गर्नु भन्दा अघि सम्म पनि प्रकाशसंग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी भइरहेको देखिन्छ । नरेश ३ वर्ष देखि मलेसियामा थिए । नरेशको श्रीमतीसंग कुराकानी पनि हुन्थेन ।
प्रकाशले आफुसंग विवाह गर्न द वाव दिएको पनि नरेशको श्रीमतीले बताएकी छन् । म संग विवाह गरिनस् भने तेरो श्रीमानलाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर द वाव दिएको नरेशको श्रीमतीको भनाई छ । नरेश प्रकाशको श्रीमतीसंग लाग्नुभन्दा पहिला पनि अन्य युवतीहरुसंग पनि नजिकिएको उनको भनाई छ ।
नरेशले देहत्याग गर्नु अघि सामाजिक संजाल फेसबुकमा एउटा लामो स्टेट्स प्रकाश भन्ने एक युवकलाइ लेख्दै आफु यो संसारबाट सधैका लागि बिदा भएका छन् ।
उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको स्टेट्स जस्ताको तस्तै :
मेरो प्रिय दुस्मन प्रकाश बस्नेत जी म तलै कुन शब्दले सम्झाउ ? तेरो मेरो लिनु केहि छैन र पछि गर्न छोडदे भनेर । तैले गर्न खोजेको के हो ? तैले म बाट चाहेको के हो ? के प्रमाण छ त संग मलाई केटि बेच्ने दलाल हो भन्दै नानाथरी धावा बोल्दै फेसबुकमा भुक्ने कति सम्मको निच होस् त ?
के म दलाल हो ? अहिले सम्म मैले कतिलाई बेचेको छु केहि प्रमाण छ ? यदि हिम्मत छ भने आमाको दश धारा धुध खाएको छस भने छातीमा चार ओटा रौ छ भने मेरो अगाडी आइज र मलाई मा’रेर देखा दम छ ? यदि हिम्मत वाला बाउको छोरा होस् भने तैले भुकेको जति प्रमाण बोकेर कानुनि प्रक्रियामा गैर त्यो केटि बेच्ने दलाल हो भनेर अदालतमा प्रमाण पेस गर सक्छस हिम्मत छ ? तैले मलाई का’ट्छु मा’र्छु भन्ने मेरो प्रसनल जिन्दगीमा आएर मेरो भित्रि यथार्थ लाइ उल्टो बनाएर नानाथरी आरोप लगाएर बोल्ने अधिकार कसले दियो तलाई ? आखिर को होस् त तैले दुई चार शब्द धावा बोलेर दुई चार जनाको भिड खडा गर्छस होला ! तर याद राख म त्यो शहरको शेर हुँ ।
नरेसले महानगरीय अपराध महाशाखालाइ पनि प्रकाश भन्ने युवकले आफुलाई दुख दिएको भन्दै फेसबुक म्यासेन्जरमा लेखेको स्क्रिन सट पनि फेला परेको छ जुन तल राखिएको छ ।
प्रकाश बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा नरेशलाइ लेखेको फेसबुक स्टेट्स पनि अहले सामाजिक संजालमा जताततै भेट्न सकिन्छ । जुन तल हेर्नुहोस
२८ बर्षिय नरेशले किन बिदेशमा नै देहत्याग गरे